OGEYSIIS:Dallada SSE oo ay ku bahoobeen jaaliyadaha ama ururada Somaliland ee Yurub ayaa iyada oo la shaqaynaysa dhammaan xubnaheeda ku baahsan dalalka Yurub |
OGEYSIIS:Dallada SSE oo ay ku bahoobeen jaaliyadaha ama ururada Somaliland ee Yurub ayaa iyada oo la shaqaynaysa dhammaan xubnaheeda ku baahsan dalalka Yurub
Daawanaayow waa Dalkaagi
Ku: Dhammaan Qurba Joogga Somaliland ee Yurub
UJ: Ogeysiis la xidhiidha munaasabada 26aad ee maalinta Qaranimada Somaliland
London (BurcoOnline) 05.05.2017 Dallada SSE oo ay ku bahoobeen jaaliyadaha ama ururada Somaliland ee Yurub ayaa iyada oo la shaqaynaysa dhammaan xubnaheeda ku baahsan dalalka Yurub ay si xushmadi ku jirto ula socodsiinaysaa xusitaanka 18ka May ee sannadkan 2017 oo ah sannad-guuradii 26aad markii ay Somaliland dib ula soo noqotay Qaranimadeeda sannadkii 1991.
Dalladu iyada oo ka warhaysa hawlaha loogu diyaar-garoobayo maalintan isla markaana xog-ogaal u ah nashaadaadka iyo hawlaha ay wadaan Jaaliyadaha Somaliland ee Yurub ayaa si gaara uga codsanaysaa in taageero iyo ka qayb loo muujiyo hawlaha sannadkan sida gaarka ah uga socda Magaalada London ee caasimada dalka Boqortooyada UK.
Maalinta Khamiista ee 18ka May waxa lagu qabanayaa isu-soo-bax aad u balaadhan, kaasoo ka dhici doona fagaaraha Richmond Terrace oo masaafad ahaan wax yar u jira goobta looga taliyo waddanka UK (West Minister). Waa fursad aynu rabno in UK iyo EU aynu la wadaagno dareenkeena ku wajahan Somaliland.
Sidoo kale isla maalintaa 18ka May waxa London lagu qabanayaa shir caalamiya oo lagaga doodayo qaddiyada Somaliland. Shirkan waxa ka hadli doona khubaro aqoon xeel dheer u leh arrimaha Somaliland iyo weliba geedi socodka Somaliland iyo maraaxishii ay soo martey.
Maalinta Sabtida ee 20ka May waxa ay Jaaliyada UK sidoo kale abaabulaysaa munaasabad balaadhan oo taburcaad loogu ururinayo abaaraha weli ka jira Somaliland.
Dhammaan muwaadiniinta reer Somaliland ee Yurub waxa aanu si gaara ugu baraarujinaynaa in si bilan looga qayb galo musaabadahan loogu hiilanyo Qaranka Somaliland.
Waxa kale oo aan si milgo leh u codsanayaa in munaasabadaha kale ee wakhtigaa lagu qabanayo waddamada Yurub in iyagana si fiican oo midnimo ku jirto looga wada-shaqeeyo.
Wixii faahfaahina ee la xidhiidha saddexdan munaasabadood waxaynu kala xidhiidhi karnaa Dallada Ururada Somaliland ee UK (SSUK) iyo Xafiiska Wakiilka Somaliland ee UK. Waxa kale oo aad kala soo xidhiidhi kartaan Guddiga Dallada SSE.
Cabdillahi A. Yuusuf (Xeef)
Guddoomiyaha Dallada SSE